Monetizer: volao ny sisa, Geo-redirect na fivoahana fifamoivoizana | Martech Zone
Monetizer: volao ny sisa, Geo-redirect na fivoahana fifamoivoizana
Alakamisy, Aogositra 25, 2016 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Mino izany na tsia, ny mpitsidika ny tranokalanao dia tsy fanantenana. Raha nanam-bola ny tranokalanao tamin'ny doka avy amin'ny antoko fahatelo ianao, ireo sehatra fanaovana doka ireo dia mila taham-panovana mba ho salama ary hampiseho doka amin'ireo mpitsidika mifandraika amin'izany. Ny isan'ny fahatsapana sy ny toerana ao amin'ny tranokalanao dia fantatra amin'ny hoe doka anao lisitra.
Inona ny fifamoivoizana sisa tavela?
Satria lasibatra ny doka novidina, ahoana ny amin'ireo mpitsidika sisa tavela izay tsy lasibatra? Izany fifamoivoizana izany dia fantatra amin'ny hoe fifamoivoizana sisa tavela. Olana ho an'ny mpamoaka an-tserasera ny fifamoivoizana tavela satria ny fifamoivoizana izay tsy zakan'izy ireo matetika no mahazo vola.
Amin'izao tsena fanaovana dokambarotra an-tserasera izao, mpanonta, dokam-barotra ary tambajotra doka maro no tsy mampiasa tanteraka ny fivezivezena finday sy tranonkala karakarain'izy ireo isan'andro. Ho fanampin'izany, ny mpitsidika avy amin'ny firenena tsy kendrena dia mety ho lasa mandany tanteraka ary matetika dia tsy tanteraka ny fahafaha-mitrandraka ny fivezivezena mamela ireo pejin'ny mpanao doka.
Satria mety ho lasa sarotra be ny handrakotra ny sehatra rehetra ary hiresaka ny zoro rehetra rehefa manandrana manangona vola tsy misy lasibatra, fivoahana na sisa tavela, Monetizer dia vahaolana mandeha ho azy sy fandaharana miatrika ny olana indrindra.
Monetizer ahafahan'ny mpampanonta mamoaka fanentanana manokana sy voavolavola be indrindra mba hahazoana vola amin'ny fivezivezena any amin'ny firenena maherin'ny 150. Mampiasa iray ny rafitra Global Smart Link. Ny fianaran'izy ireo amin'ny milina vAuto algorithm dia mihevitra ny toerana misy ny mpitsidika, ny rafitra miasa ary ny mpitatitra - miaraka amin'ireo anton-javatra maro hafa - mba hamokarana eCPC (miavaka isaky ny tsindry) ho an'ny mpiara-miasa aminay.
Ny tranonkalanay dia manohy mamokatra vokatra miavaka, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka maro izay mamokatra vola an'arivony dolara isan'andro avy amin'ny fifamoivoizana izay mety tsy nasiam-panitsiana. Rehefa mifantoka amin'ny haitao ao ambadiky ny lampihazo sy ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra ary ny fifandraisana vaovao amin'ny mpanao dokambarotra izahay, dia faly mahita ny hoavin'ny Monetizer sy ny mpiara-miasa aminay! Max Tetrault, mpiara-miasa mitantana, Monetizer
Monetizer dia mandray vola ~ 120 tapitrisa potsitra / isan'andro sy ~ 3 miliara tsindry / volana avy amin'ny firenena 150+. Izy ireo dia afaka manangona vola amin'ny finday sy tranonkala (na fivezivezena mahazatra na ho an'ny olon-dehibe). Miovaova ny Global Smart Link -n'izy ireo, ao anatin'izany ny safidy SEO-friendly. Ny interface Monetizer mpiara-miasa dia manolotra antontan'isa sy tatitra maharitra, miaraka amin'ny karama isan-kerinandro azo amin'ny mpiara-miombon'antoka.
Taitra aho rehefa nanangana ny Monetizer voalohany. Mahatalanjona ny teknolojia, satria manome vola ny fifamoivoizana izay nitolomantsika tokoa taloha. Bert Xia, mpitantana ny fampandrosoana ny orinasa, YeahMobi
Midira ho an'ny Monetizer
Fialana andraikitra: Monetizer izao dia manao fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra eto amin'ny tranonkalantsika (izany no nahatsikaritra azy ireo!)
Tags: fanisana amin'ny dokalisitra dokam-barotrabert xiaecpcfanatsarana vidiny isaky ny kitihomax tetraultmonetizerfifamoivoizana sisa tavelainona ny fifamoivoizana sisa tavelayeahmobi
4 sakana amin'ny fampiharana marketing automatique mahomby
CoffeeSender: Mandefasa karatra fanomezana Starbucks miaraka amin'ny tsindry iray
Aug 26, 2016 amin'ny 6: 07 AM
lahatsoratra tsara momba ny fifantohana amin'ny fifamoivoizana sisa !! dia hanandrana !!